Waa kuma Nikodemus? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Intii uu noolaa dhulka, Ciise wuxuu soo jiitay indhaha dad badan oo muhiim ah. Mid ka mid ah dadkaas aadka loo xusuusto wuxuu ahaa Nikodemos. Wuxuu xubin ka ahaa Golaha Sare, koox ka mid ah culimada hogaamineysa oo iskutallaabta iskutallaabta ku qodbay Ciise iyo ka qayb qaadashada Roomanka. Nikodemos wuxuu xidhiidh aad u kala duwan la lahaa Badbaadiyeheenna - cilaaqaad gabi ahaanba isaga beddelay. Markuu Malaki ugu horreeyay la kulmay Ciise, wuxuu ku adkaystay inay ahayd inay ahaato habeenkii. Sabab? Sababta oo ah wax badan ayuu lumi lahaa haddii lagu arki lahaa nin ay waxbarisyadiisu si weyn uga soo horjeeddo kuwa xildhibaannadiisa. Wuxuu ka xishooday inuu la arko.
Waqti yar kadib waxaan aragnay Nikodemos oo aad uga duwanaa booqdaha habeenkii. Baybalku wuxuu inoo sheegayaa in isaga oo keliya Ciise uusan difaacin xubnahiisa baarlamaani, laakiin sidoo kale wuxuu ka mid ahaa labada nin oo shaqsi ahaan ka codsaday Bilaatos inuu gacantiisa ku wareejiyo Ciise dhimashadiisa ka dib. Farqiga u dhexeeya Nikodemus ka hor iyo Nikodemos ka dib markuu la kulmay Masiixu runtii waa farqi u dhexeeya maalinta iyo habeenka. Maxaa isbedelay? Hagaag, waa isbedel la mid ah oo ku dhaca dhammaanteen kadib markaan la kulano oo aan la xiriirno Ciise
Sidii Nikodemus, inteena badan baa nafteenna isku hallaynay wanaagga ruuxiga ah. Nasiib darrose, sidii Nikodemos loo aqoonsaday, kuma lihin arrintaas tan. Haddii aan nahay dad dhacday, awood uma lihin inaan naftayada badbaadinno. Laakiin rajo ayaa jirta. Ciise wuxuu u sharxay isaga - «Ilaah wiilkiisii ​​uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u badbaadiyey dunidii. Ku alla kii rumaystaa ma xukumi doono » (Yooxanaa 3,17-18).
Ka dib markii Nikodemos uu la kulmay Wiilka Ilaah si shaqsi ahaaneed oo uu ugu aaminay inuu ku gaadho nolosha weligeed ah, wuxuu sidoo kale ogaa inuu Masiixa Masiixu hadda yahay mid aan daahir ahayn oo nadiif ah Ilaah hortiisa. Ma jirin wax uu ka xishoon lahaa. Wuxuu soo bartay wixii Ciise ku dhawaaqay: - Laakiin ku alla kii runta falaa, nuurkuu yimaadaa si loo muujiyo in shuqulladiisa lagu sameeyey Ilaah. (Yooxanaa 3,21).
Ka dib markii aan xiriir la galno Ciise, waxaan isweydaarsaneynaa aaminaada nafteena ku aaminay Ciise ee naga xoreynaya inaan ku noolaano nolol nimco leh. Sidii Nikodemos, faraqku wuxuu u weyn karaa inta u dhaxaysa maalinta iyo habeenka.